ခါးနာနေစဉ် ချက်ချင်းရှောင်ရှားသင့်သည့် အပြုအမူ ခြောက်မျိုး
ခါးနောက်ကျောနာတာက အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲဒီပြဿနာကြောင့် အလုပ်အကိုင် ထိခိုက်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါ တယ်။ ခါးနောက်ကျောအောက်ပိုင်း နာတာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင် ချက်ချင်းရပ်တန့်သင့်တဲ့ အပြုအမူ ခြောက်မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁) နာကျင်မှု ပျောက်ကင်းအောင် စောင့်ဆိုင်းနေခြင်း ခါးနာတဲ့ဝေဒနာက တစ်ပတ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ပတ်ကျော် ကြာနေခဲ့ရင် ဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီး ကုသမှုခံယူပါ။ မိမိဘာသာ ရောဂါပျောက်နိုးနိုးနဲ့ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတွေသောက်နေမယ်ဆိုရင် ကုသမှုမှာ ခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ခါးနာ တာကို စောစောစီးစီးကုသမှုခံယူလေလေ၊ ပျောက်ကင်းနှုန်း မြန်လေလေပါ။ ၂) အပူ သို့မဟုတ် အအေးကပ်ခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ ခါးနာတာကြောင့် အပူ ဒါမှမဟုတ် အအေးကပ်တာက နာကျင်တဲ့ဝေဒ နာသက်သာနိုင်ပေမယ့် ယာယီသာ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုအများအပြားအရ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားမှန်ကန်အောင် လေ့ကျင့်ပေးတာက ခါးနောက် ကျောနာကျင်မှုအတွက် အလွန်ထိရောက်တဲ့ကုသမှုလို့ […]
Posted in: DontsForYourHealthGood Health Journal	 August 27, 2021
သင့်ဒူးခေါင်းပျက်စီးစေနိုင်သည့် အမူအကျင့် ငါးမျိုး
ဒူးခေါင်းကို ဒဏ်ရာရထားဖူးတဲ့အတွက် ဒူးနာဝေဒနာခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင် နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းထဲက အမှတ်မထင် ဒူးခေါင်းကို ဒဏ်ရာရစေနိုင်တဲ့အမူအကျင့်ငါးမျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ကိုယ်အလေးချိန်မြင့်မားခြင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အလေးချိန် တစ်ပေါင်တိုးလာတိုင်း သင် မတ်တတ်ရပ်စဉ် မှာ သင့်ဒူးအပေါ် ဖိအားသက်ရောက်တဲ့ ပေါင်ချိန် သုံးပေါင် တိုးလာပါတယ်။ အဝလွန် တာကြောင့် အရိုးအဆစ်ရောင်ရောဂါ ဝေဒနာခံစားရကာ ဒူးခေါင်းအတွင်းမှ အရိုးနု တွေပျက်စီးလာပြီး အလွယ်တကူ ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ပေါင်ကျော် လျှော့ချလိုက်ရုံနဲ့ အရိုးအဆစ်ရောင်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုအရ သိရှိထားပါတယ်။ ၂။ လေ့ကျင့်ခန်းလုံလုံလောက်လောက် မလုပ်ခြင်း ဒူးခေါင်းကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက အသွား နှစ်ဖက်ပါ ဓားသွားလိုမျိုး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒူးခေါင်းကျန်းမာဖို့အ တွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ […]
ဘာကြောင့် အိပ်ချိန်အပြည့်ရရှိတာတောင် အိပ်ချင်နေရတာလဲ ?
လူတစ်ယောက်ဟာ အိပ်ချိန်အပြည့်အိပ်ထားခဲ့ရင် မနက်အိပ်ရာထခါစမှာ ဦးနှောက်ကြည်လင်စွာနဲ့ လန်းလန်းဆန်းဆန်း နိုးလာနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ချိန်အပြည့်ဆိုတာက တစ်ညကို ခုနစ်နာရီနဲ့ရှစ်နာရီကြား အိပ်တာဖြစ်တယ်လို့ အိပ်စက်မှုဆိုင်ရာဆေးပညာ အမေရိကန်ဌာနက သတ်မှတ်ချက်အရ သိရပါတယ်။ အိပ်ချိန်အနည်းငယ်ပဲရှိတာကြောင့် မနက်အိပ်ရာထမှာ အိပ်ရေးမဝတဲ့ပုံစံနဲ့ နိုးလာတာက အံ့သြစရာအနေအထားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အိပ်ချိန်အပြည့်အဝအိပ်ထားတာတောင် အိပ်ရာထခါစမှာ အိပ်ရေးမဝသလိုဖြစ်နေရင်တော့ တစ်ဖက်ပါအကြောင်းတွေကြောင့်ပါ။ သင့်မှာ Sleep Apnea ရှိနေတာကြောင့်ပါ Sleep Apnea ရှိနေရင် ဦးနှောက်ကို ညဘက်မှာ အိပ်ရမလား အသက်ရှူရမလားဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ တွန်းအားပေးနေတဲ့အခြေအနေ ဖြစ်နေပါတယ်။ သင်အိပ်တဲ့အခါမှာ လျှာခင်ထဲက ‌ကြွက်သားပျော့တွေက လေပြွန်ကို ပိတ်ဆို့ပြီး အသက်ရှူတာ ယာယီရပ်တန့်သွားနိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်သွားတဲ့အတွက် အသက်ရှူမဝတာကြောင့် အောက်ဆီဂျင်ပြန်လည်ရရှိဖို့ အသက်ရှူနိုင်အောင် ဦးနှောက်က သင့်ကို အလိုလိုနှိုးလိုက်ပါတယ်။ ညအိပ်စဉ်မှာ ဒီလိုမျိုးခဏခဏဖြစ်တဲ့အတွက် […]
Posted in: Why do we get those symptoms !!!Good Health Journal	 August 24, 2021
မိမိအိမ်မှာ ဖော်ပြပါလူနာတွေနဲ့ ၆၅ နှစ်နဲ့အထက် အသက်ကြီးသူတွေရှိနေရင်-
နှလုံးရောဂါရှိသူ၊ ကင်ဆာရောဂါရှိသူ၊ ဆီးချိုရောဂါရှိသူ၊ သွေးတိုးရောဂါရှိသူ၊ ရင်ကျပ်နဲ့ တခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါရှိသူတွေက ပြင်းထန်တဲ့ကိုဗစ်ရောဂါရရှိနိုင်ခြေ အလွန်မြင့်မားပါတယ်။ .. .. မိမိအိမ်မှာ ဖော်ပြပါလူနာတွေနဲ့ ၆၅ နှစ်နဲ့အထက် အသက်ကြီးသူတွေရှိနေရင်- ♦ တတ်နိုင်သမျှ အိမ်ထဲမှာသာ နေထိုင်ကြဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ♦ မဖြစ်မနေ အပြင်ထွက်ရရင် Mask တပ်ထားပါ။ ♦ မလိုအပ်ဘဲ စကားကြာကြာ မပြောပါနဲ့။ ♦ အိမ်ထဲမှာလည်း သူတို့တွေနဲ့စကားပြောရင် mask တပ် ပြီးမှပြောပါ။ ♦♦ အရေးကြီးတဲ့အချက်က ♦♦ ♦ မိမိပြောလက်စ လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ သူတို့ကို ဖုန်းမပြောခိုင်းဖို့ပါ။ ♦ တခြားသူတွေကိုလည်း မိမိဖုန်းနဲ့ အလွယ်တကူစကားမပေးပြောပါနဲ့။ ♦ မိမိ ဒါမှမဟုတ် မိမိဖုန်းနဲ့စကားပြောသူမှာ ပိုးရှိနေရင် ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှတစ်ဆင့် ပိုးကူးစက်နိုင်တာကြောင့် […]
Posted in: COVID SPECIALGood Health Journal	 August 14, 2021
ကြှနျမတို့နိုငျငံမှာ ကိုဗဈတတိယ လှိုငျးနဲ့အတူ အောကျဆီဂငြျမရရှိမှာကို စိုးရိမျနကွေရပါတယျ။ အမှနျမှာ တော့ ကိုဗဈပိုးရှိသူ ၈၀ ရာခိုငျနှုနျးဟာ ရောဂါအသငျ့အတငျ့သာဖွဈပွီး ၁၅ ရာ ခိုငျနှုနျးခနျ့ကပဲ အောကျဆီဂငြျအဆငျ့ ၉၄ ရာခိုငျနှုနျးအောကျ လြော့ကသြူတှဖွေဈ ပွီး ၅ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့က အလှနျ ဆိုးရှားတဲ့ အခွအေနဖွေဈပွီး အောကျဆီ ဂငြျအဆငျ့ က ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးအောကျလြော့ကသြူ တှဖွေဈကွပါတယျ။ ကိုယျတှငျးအောကျဆီဂငြျပမာဏတိုငျးတာနညျး အောကဆြီဂငွလြွော့ကလွာရငြ အ သကရြှူမဝတာ၊ နှုတခြမြးနဲ့မကွနြှာပှာတာ၊ အိပရြာကနိုးထဖို့ ခကခြဲတာ၊ ခေါငြးထဲမှာ ဇဝဇဝေါဖှစနြတောတှလေို လကြျခဏာတှေ ပှတတပြါတယြ။ ကလေးတှမှောတော့ နှာခေါငြးပှနတတေပြှီး အစာစားလို့မရ တာ၊ ရသေောကလြို့မဝငတြာတှဖှစေတြတြ ပါတယြ။ ကိုယျတှငျးမှာ အောကျဆီဂငြျအဆငျ့ ဘယျလောကျပမာဏရှိတယျဆိုတာကို သိရှိဖို့အတှကျ လကျထိပျမှာတိုငျးတဲ့ Oximeter ဆိုတဲ့ စကျကလေးရှိပါတယျ။ […]
Posted in: COVID SPECIALGood Health Journal	 August 13, 2021
ကိုဗစ်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ သဘာ၀အတိုင်း ခုခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပါ
ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကို ကျော်ဖြတ် နိုင်ဖို့အတွက် ခုခံအားမြင့်တက်နေဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ခုခံအားမြင့်တက်ဖို့ အာဟာရပြည့်၀တဲ့အစားအစာတွေ၊ ဗီတာ မင်တွေ မှီဝဲရတဲ့အပြင် အောက်ပါတို့ကို လည်း ပြုလုပ်ရပါမယ်။ ၁- အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပါ အိပ်ရေး၀တာက ခုခံအားစနစ်ကို များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်တာက တီဆဲလ် တွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို တိုး တက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ တီဆဲလ်ဆို တာက ခုခံအားစနစ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး ကိုယ်တွင်းကို ကူးစက်နေတဲ့ပိုးတွေကို သုတ်သင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၂- အရက်မသောက်ပါနဲ့ အရက်ပြန်က ပိုးတွေကိုသေစေနိုင် တယ်ဆိုပေမယ့် အရက်ကတော့ ခုခံအား စနစ်ကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုးကို တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအား ကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။ ၃- ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ ကိုဗစ်ရောဂါက အသက်ရှူလမ်း ကြောင်းကို အဓိကတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့် အဆုတ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်က အဆုတ် […]
Posted in: COVID SPECIALGood Health Journal	 August 11, 2021
ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းမှာ ဒက်ဆာကို အသက်ကယ်ဆေးအဖြစ် လူသိများလာကြပါတယ်။ဖျားတာ ရက်တာရှည်လို့ မောပန်းလာပြီး အောက်ဆီဂျင် လျော့ကျလာရင် ဒက်ဆာကို သောက်ဆေး ဒါမှမဟုတ် ထိုးဆေး အနေနဲ့ အသုံးပြုနေကြတာမို့ ဒက်ဆာဆိုတာ ဘာဆေးလဲ၊ ဘယ်လိုလူတွေ ဘာကြောင့် အသုံးပြုသင့်သလဲ၊ ဒီဆေးကိုသုံးရင် ဘာတွေဆောင်သင့်၊ ရှောင်သင့်သလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒက်ဆာလို့ အတိုကောက် ခေါ်တဲ့ ဒက်ဆာမီသဇုန်း Dexamethasone က စတီးရွိုက်ဆေးဝါး တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကိုဗစ်ရောဂါ အသင့်အတင့်ပြင်းထန်သူတွေနဲ့ အလွန်ပြင်းထန်သူတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Oximeter နဲ့တိုင်းရာမှာ အမြဲတမ်း အောက်ဆီဂျင် ၉၂ မှတ် ရောက်သူတွေကို သောက်ခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီဆေးဝါးက ဆိုးရွားတဲ့ရောဂါပိုးတွေ အတွက်ထိရောက်မှု ရှိပေမယ့် ဆေးဝါးအသုံးပြုနည်း မမှန်ကန်ရင် ရေရှည်မှာ ဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ […]
ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ လက်ရှိထိုးပေးနေတဲ့ ကာကွယ်ဆေးက တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm အမျိုးအစားဖြစ်လို့ WHO က အသိအမှတ်မပြုဘူး၊ အခုပျံ့နှံ့နေတဲ့ ကိုဗစ်မျိုးစိတ်သစ်တွေကို မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ fb ပေါ်မှာ မြင်သိနေရလို့ ဒီကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး website အမျိုးမျိုးပေါ်က ရေးသားထားချက်တွေမှ ကောက်ယူကာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကာကွယ်ဆေးကို WHO က ယခုနှစ် မေလအတွင်းက သုံးစွဲဖို့ ခွင့်ပြုထားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်မှာ အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ ကိုဗက် အစီအစဉ် နဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ဖြန့်ဝေပေးသွားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ Sinopharm ရဲ့ကိုဗစ်ရောဂါအပေါ် ကာကွယ်နိုင်စွမ်းက ၂ ကြိမ်ထိုးပြီးရင် ၇၈.၁ % ရှိပါတယ်။ ပြင်းထန်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတော့ ၉၀% ထိ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ Pfizer နဲ့ […]
ကျွန်မရဲ့ အသက် ၉၀ ကျော် အဒေါ်နှစ်ယောက်ရဲ့ ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံက အလွန်ထူးဆန်းပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးမှာ ဆီးချိုရှိကြပါတယ်။ သူတို့ကနယ်မှာ သူတို့ကို ပြုစုသူတွေနဲ့ အတူတူနေကြပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ အဒေါ် နံပါတ် (၂) ကအနည်းငယ်ဖျားပြီး စကားမပြောတော့ဘဲ ငြိမ်နေတာကြောင့် ဆီးချိုတိုင်းကြည့်ရာ ၄၅ ပဲရှိတော့လို့ ကျွန်မကို ဖုန်းဆက်ပြီး မေးပါတယ်။ လောလောဆယ် ဂလူးကို့စ်တိုက်(အလွယ်မရှိရင် သကြားလုံးငုံခိုင်းပြီး)ဆီးချိုဆေးတွေကို ခဏရပ်ထားဖို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ သေချာ မေးကြည့်တော့ အိမ်က ကလေးမတွေ နှာမွန်ပြီး ဖျားနေကြတာကြောင့် ကိုဗစ် ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်နေ့ညမှာလည်း ဆီးချို ဆက်ကျနေတာကြောင့် ရန်ကုန်က သူတို့ ပြနေကျ သမားတော်နဲ့ Teleconsultation လုပ်ဖို့ ညွှန်လိုက်လို့ အခုထိ ကိုဗစ်နဲ့ တိုက်ပွဲ ဝင်နေတုန်းပါ။ သူ […]
Posted in: COVID SPECIALGood Health Journal	 August 10, 2021